Igumbi lokulala eli-1 elinendawo yomlilo
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDebby
Indlu yeendwendwe yethu yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla eSouthwest Minnesota ukuba ujonge ukubaleka kwisixeko esikufuphi kwelinye lamachibi amaninzi eMinnesota. Ukuphuma kwelanga phezu kwechibi kusasa kuyamangalisa kwaye amathafa aqengqelekayo anombono wesidiliya sethu kunzima ukuwabetha.
I-Fish Lake lichibi elidumileyo nelihle, 26 ft ubunzulu kwiindawo, elibamba i-walleye, i-bass, i-perch, kunye nabantu abaninzi ngemini eshushu. Kodwa ayidli ngokugcwala, kwaye ihlala inomgangatho ophezulu wamanzi.
Nandipha umbono wechibi kunye nechibi ngokwalo. Kukho ukufikelela koluntu kwiingcango ezimbini ezantsi, kwaye ukufikelela kubandakanya ipaki ye-Obie Knutson enendawo yokuhlala, umgaqo-nkqubo wokusebenzisa wokuqala oza kuqala.
Ipaki ye-Obie Knutson inedokhi yoluntu enkulu edadayo, kunye nezixhobo zebala lokudlala.
Ukuba uzisa isikhephe, isikhephe sikawonke-wonke sokumisa iingcango ezimbini phantsi. Ungapaka isikhephe sakho esirhuqwayo kwindawo kawonke-wonke ngelixa isikhephe sisetyenziswa, okanye kwindlela yendlu.